Ingxubevange Plate Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ingxubevange Plate Factory
Pipe engu-2205 Engagqwali
Ukulingana okungalingani ss304 316 ibha yensimbi engagqwali
Incazelo I-ASTM B265 Titanium plate / Titanium sheet Sheet Material 1: I-Titanium emsulwa, amandla aphansi kakhulu kanye nokuqina okuphezulu. Ibanga 2: I-titanium emsulwa esetshenziswa kakhulu. Inhlanganisela engcono kakhulu yamandla, i-ductility nokuqina. Ibanga lesi-3: Amandla aphezulu e-Titanium, asetshenziselwa ama-Matrix-plate kuma-shell and tube heat exchange. Ibanga lesi-5: I-alloy titanium alloy ekhiqizwa kakhulu. Amandla aphakeme ngokweqile. ukumelana nokushisa okuphezulu. Ibanga lesi-7: Ukuphikiswa kokugqwala okuphezulu ekwehliseni nasekuhlanganiseni indawo ...
I-Nickel Alloy Plate / ishidi inconel 600 601 625 X-750 718 825
Igama lomkhiqizo I-Nickel Alloy Plate / sheet inconel 600 601 625 X-750 718 825 Material Monel / Inconel / Hastelloy / Duplex Steel / PH Steel / Nickel Alloy Shape Round, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Isikwele, Ibha, Ipayipi, Ishidi Ibanga Duplex: 2205 (UNS S31803 / S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (Zeron 100), 2304,904L Abanye: 253Ma, 254SMo, 654SMo, F50 (UNSS32100) F60, F61, F61, F61, F65,1J22, N4, N6 njll Ingxubevange: Ingxubevange 20/28/31 Hastelloy: HastelloyB / -2 / B-3 / C22 / C-4 / S / C276 / C-2000 / G-3 ...
Isaziso sokushintsha kwesitho senkampani ...
Makhasimende Athandekayo: Ibhizinisi lethu liyakhula ngenxa yentuthuko eqhubekayo kule minyaka. Kusukela ngoSepthemba 2020, sisungula inkampani entsha ebizwa ngeJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd iJiangsu Joyina i-Industrial Co, Ltd manje yi ...
gtag ('isethaphu', 'AW-607285546');